Kedu igwe okwu ịhọrọ iji mee ndekọ zuru oke | Akụkọ akụrụngwa
Kedu igwe okwu ịhọrọ ịhọrọ ndekọ zuru oke
Luis Padilla | | Ngwa, Foto na ụda
Họrọ igwe okwu abụghị ọrụ dị mfe. Dịka ọ na-eme na ihe niile metụtara teknụzụ, ọnụ ala na njedebe na-abụkarị ọnụ, yana oke ọnụ anaghị ekwe gị nkwa na ọ kachasị mma maka ebumnuche gị. Inye igwe okwu buru ibu ma ụdị igwe okwu dị iche iche dabara adaba na ụfọdụ mkpa ma ha adighi mma maka ndị ọzọ. Dynamic ma ọ bụ condenser? XLR ma ọ bụ USB? Omnidirectional ma ọ bụ Cardioid? N’isiokwu a anyị ga-egosi gị kedu ụdị igwe okwu dị iche iche na ọnọdụ nke ha kacha mmaN'ụzọ dị otu a ị nwere ike họrọ site na obere ihe ize ndụ nke ịmehie na ịmara ihe ị na-emefu ego ahụ, n'ihi na itinyekwu ego apụtaghị na ị ga-enweta nsonaazụ ka mma.
1 Dị igwe okwu
1.1 USB ma ọ bụ XLR
1.2 Omnidirectional ma ọ bụ directional
1.3 Ihe omimi ma ọ bụ condenser
2 Ihe atụ nke igwe okwu
Dị igwe okwu
E nwere ọtụtụ ụzọ iji kọwaa igwe okwu mana ebe a anyị ga-elekwasị anya na nke kachasị mkpa:
Dabere na ụdị njikọ: USB ma ọ bụ XLR.
Dị ka nduzi ya si dị: omnidirectional ma ọ bụ directional.
Dabere na ụdị akpụkpọ ahụ: ike ma ọ bụ condenser.
USB ma ọ bụ XLR
Ọ na-abụkarị mgbe ịmalitere na ụwa ndekọ ị na-eleba anya na igwe okwu USB. Ha dị ọnụ ala ma nye gị ihe niile ịchọrọ n'ebughi ịzụta ngwa ndị ọzọ. Ejikọtara igwe okwu sUSB na kọmputa gị site na eriri ha tinye ma ị nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na ha. Agbanyeghị, onye ọ bụla kpebiri ụdị igwe okwu a ga-eme ngwụcha ahụ na XLR. Ndị na-ahụ maka USB USB na-enyekarị ọghọm adịghị mma, ma ọ dịkarịa ala ndị nọ na ọnụahịa dị ọnụ ala karị, ihe ọdịyo ị nwetara na ha dịkwa oke mma. Ha na-abụkarị igwe okwu n'ihi ya dabara adaba maka oge ụfọdụ na-enweghị nnukwu mkpa.
Igwe okwu XLR na-enyekarị ọtụtụ nhọrọ mgbe ị na-ahọrọ ụdị ahụ, yana Ọ bụ ezie na igwe okwu n’onwe ya anaghị adịkarị oke ọnụ (ọ bụ ezie na enwere ihe niile) ọ chọrọ ngwa ndị ọzọ iji jikọọ ya na kọmputa gị. A na-ejikọta ihe njikwa agwakọtara site na USB nke ị ga - ejikọ igwe okwu, ma ọ bụ na ọ dịkarịa ala interface XLR dị mfe karịa njikwa agwakọta. Fewbọchị ole na ole gara aga, m nyere gị nyocha nke igwekota Behringer Q802USB na maka ọnụahịa na arụmọrụ bụ nhọrọ magburu onwe ya iji jikọta na ụdị igwe okwu. Na nloghachi, mgbe ịchọrọ ịgbanwe igwe okwu, ịnwere ike ịme ya n'ụzọ dị mfe mgbe ị na-edebe ihe ndị ọzọ, yana ụdị ụda ị ga-enweta ga-aka mma.
Omnidirectional ma ọ bụ directional
Dabere n’otú ha si weghara ụda ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ nke abụọ omnidirectional (niile ntụziaka) ma ọ bụ directional. N'ime ndị a kachasị bụrụ "cardioids"A na-akpọ ya n'ihi na ha na-ejide ụda dị ka "obi", na-ebute ihe dị n'ihu ya ụzọ na-eleghara ihe dị n'azụ anya.
Omnidirectional mics na-enye nnukwu ụda dị iche iche ebe ọ bụ na ha weghaara ihe niile gbara ha gburugburu, yabụ ha dị mma mgbe anyị chọrọ nke ahụ, mana ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ bụ nke ahụ Naanị anyị na-ege onwe anyị ntị na-enweghị nsogbu site n'ụgbọ ala ndị na-agafe, anyị ga-ahọrọzi microid cardio nke ahụ na-ebuli ụda anyị ma jụ ndị ọzọ.
Ihe omimi ma ọ bụ condenser
Igwe okwu na-agbanwe agbanwe dị ike, ha ga-adịgide ndụ ma ọ bụrụ na ị kpachaara anya mebie ha. Ha na-eguzogide iru mmiri. Ha achọghị isi iyi iji rụọ ọrụ, nke na-adọrọ mmasị, ma ha na-ejikwa nnukwu mpịakọta nke ọma na-enweghị mgbagha. Ha anaghị enwekarị mmasi na mkpọtụ ndị gbara anyị gburugburu, mana agbanyeghị na ha dị oke ọkụ na-ewepụta "pops", mkpọtụ na-adịghị mma nke na-eme mgbe akpọpụtara mkpụrụedemede "P" na nke a na-ewepụ n'ụzọ dị mfe site na nzacha "mgbochi pop" .
Igwe igwe mmeghari nwere ikike odi nma karie oge edere ya n’onodu odi nma. Ha na-enwe mmetụta dị nro ma na-ejide ụdị mkpọtụ ọ bụla, yabụ ọ bụrụ na ịdekọ na studio na mgbidi padded na ịgbachi nkịtị nsonaazụ ga-adị mma, mana ọ bụrụ na ị na-eme ya n'ime ụlọ gị dị ka iwu izugbe ha ga-enye gị isi ọwụwa. n'ihi na ọ ga-eweghara ụdị mkpọtụ ọ bụla, mkpọtụ, mkpọtụ si na mpụga ...
Ihe atụ nke igwe okwu
Samson SAGO Mic bụ ihe atụ zuru oke nke ihe igwe okwu USB nwere ike inye anyị. Ọ bụ igwe okwu condenser ma ọ nwere ike ịbụ omidirectional ma ọ bụ cardioid ekele ngbanwe n'akụkụ. A nnọọ ezi uche price (€ 35-40), nnọọ mfe njikwa na ezigbo imewe ka mgbe niile na-ebu gị. Otu eriri USB iji jikọọ ya na kọmputa gị na-eje ozi iji nye ya ikike zuru oke iji rụọ ọrụ, yana nwekwara mmepụta isi okwu iji nyochaa ọdịyo. Agbanyeghị, ogo dị mma ọ na-enye anyị zuru ezu iji soro obere vidiyo vidiyo mana ọ bụghị iji nweta nsonaazụ kacha mma. Have nwere ya dị na Amazon ugbu a maka € 33.
Igwe okwu Blue Microphones YETI igwe dị ogologo bụ otu n’ime ihe akwadoro maka pọdkastị. Ọnụahịa dị oke ọnụ (125-150 €) na njikọta USB ya na-eme ka ọ bụrụ ezigbo nwa akwukwo maka ndị na-achọ ihe dị mfe ma dịkwa ọnụ ala. Nke a bụ igwe okwu diaphragm condenser buru ibu, nke pụtara na ọ ga - ejide azụ ọ bụla na - efe efe n’ime ụlọ gị. Ọ bụ ezie na ọ na-enye ohere ịhọrọ ụdị dị iche iche (omnidirectional, cardioid, bidirectional ...) a na-atụ aro ka ị jiri ya n'ime ụlọ kwadebere maka ndekọ ma si otú a zere nkuzi na-adịghị mma na mkpọtụ ndị ọzọ. Have nwere ya dị na Amazon maka € 126.
Otu n'ime nhọrọ dị oke ọnụ na nsonaazụ dị mma (maka ọnụahịa o nwere) bụ Behringer Ultravoice XM8500. Igwe okwu ike dị ike nke nwere njikọ XLR nke ga-ezu oke maka ọtụtụ ọnọdụ. Abụ m onye m na-eji igwekota nke egosiri m n'ihu ya ma nsonaazụ ya dị mma, na-enweghị ịnakwu nkuzi nke ụlọ ahụ. Dị ka ụdị mics a, popping bụ nsogbu mana enwere ike iwetulata ya site na ikwu okwu n ’ebe kwesiri ya ma ọ bụ ịzụ nzacha. Ahịa ya dị € 19,90 na Amazon nke na - eme ka ọ bụrụ nhọrọ dị mma ịmalite egwu gị.
Otu n'ime nhọrọ kachasị mma maka ndekọ Podcast na-enweghị mgbagha ụda olu Shure SM58.. Dị ka nke gara aga ọ bụ ike, cardioid na XLR. Ọdịdị ọdịyo ọ na-enweta dị ezigbo mma ma ọ bụ ya mere na ọ bụ nhọrọ nke ọtụtụ pọdkastị, ìgwè ndị agha na ọbụna ndị nkwusa na America. O doro anya na ọnụahịa ya dị elu karịa ụdị nke gara aga m kwuru, na-eru € 125 na Amazon.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Ngwa » Ngwa » Kedu igwe okwu ịhọrọ ịhọrọ ndekọ zuru oke
6 smartphones ị nwere ike ịzụta ihe na-erughị euro 300 ma ha agaghị emechu gị ihu
Black Friday 2015; ego, onyinye na otutu ihe